निष्क्रिय रहेनछन् खाग तस्करहरु | चितवन पोष्ट दैनिक
निष्क्रिय रहेनछन् खाग तस्करहरु
२०७१ चैत्र १७, मंगलवार ०२:०६ गते
गैँडा, बाघजस्ता दुर्लभ वन्यजन्तुको अंग तस्करीमा संलग्न गिरोहहरुलाई कमजोर ठान्नु ठूलो गल्ती हुँदोरहेछ । निकुञ्ज प्रशासन यस्ता गिरोहका विरूद्ध जति नै सक्रिय भएर सशक्त रुपमा किन नलागेको होस्, तस्करहरु एउटा मौकाको प्रतीक्षामा सधैँ हुँदारहेछन् । गत वर्षको वैशाख २० यता चितवन निकुञ्जभित्र र यसआसपासको क्षेत्रमा तस्करहरुले गैँडा मारेको कुरा सार्वजनिक भएको छैन । तर, उनीहरु मौका पर्खेर बस्दारहेछन् भन्ने कुरा अघिल्लो हप्ता अर्थात् चैत्र ८ गते आइतबार निकुञ्जभित्र भएको एउटा गम्भीर घटनाले पुष्टि गरेको छ ।
निकुञ्ज प्रशासन र सेनाको गस्ती झन्पछि झन् कडा हुँदै गएको छ । निकुञ्जको सर्वाधिक खोजीमा रहेका खुंखार गैँडा सिकारी राजकुमार चेपाङ पक्राउ परे । लुक्दै र छल्दै उनी मलेसिया पुगे । तैपनि, उनी उम्कन पाएनन्, पक्राउ परेरै छाडे । २० वटा गैँडा आफैँले मारेका, पाँचवटा गैँडा घाइते बनाए र अरुले मारेका थप दुईवटा गैँडाको खाग झिकेर बेचेको आफैँले स्वीकार गर्ने राजकुमारको गिरफ्तारी निकुञ्जको ठूलो सफलता थियो ।
पक्राउपछि राजकुमारले भनेका थिए, ‘गैँडा मार्न परिचालित हुनेमध्ये समाउन नसकिएको व्यक्ति म नै थिएँ । मलाई नै पक्रिएपछि क्यारेम बोर्डको अन्तिम गोटी भित्र पसेजस्तै गेम खत्तम ।’ अर्थात्, यसो भनिरहँदा अब गैंँडा सिकार हुँदैन भनेर अनुमान लगाउन सकिन्थ्यो । गैँडा मारेर जे जुक्ति लगाएर जहाँ पुगेर लुके पनि एक न दिन एक दिन पक्राउ पर्न बेर लाग्दोरहेनछ भन्ने प्रमाणित गरेको थियो, राजकुमारको पक्राउले । जे–जस्तो गरे पनि पक्राउ परिँदोरहेछ भन्ने ठानेपछि गैँडा मार्न अरु अग्रसर नहोलान् भन्ने जसले पनि सोच्न सक्ने कुरा थियो ।
तर, विषय यस्तो भएन । राजकुमारको गिरफ्तारीपछि निकुञ्जभित्र गैँडा मारेको कुरा सार्वजनिक भएको त छैन, तर जे–जस्तो घटना बाहिर आयो त्यो चानचुने छैन । निकुञ्जको पूर्वी क्षेत्र कठारनजिक निकुञ्जभित्रको जंगलमा चैत्र ८ गते एउटा यस्तो बेवारिसे अत्याधुनिक राइफल भेटियो, जुन नेपाली सेनासँग समेत छैन । हतियार भेटिएको विषयमा सुरक्षा अधिकारी वा निकुञ्ज प्रशासनले आधिकारिक कुनै जानकारी सार्वजनिक गरेको छैन, तर घटना क्रमले देखाएको के हो भने त्यो राइफल गैँडा मार्नकै लागि निकुञ्जभित्र लगिएको थियो ।
बेवारिसे अवस्थामा निकुञ्जभित्र एमसिक्टन ए वन राइफल फेला पारिएको हो । म्याग्जिन र गोलीसहित राइफल फेला प¥यो । राइफलबाट गोली चलेको बाहिर नसुनियोस् भन्नका लागि साइलेन्सर पनि राखिएको थियो । यसले के देखाउँछ भने त्यो गैँडा सिकारका लागि नै भित्र्याइएको हतियार थियो । गोली चले गाउँ वा सुरक्षा पोस्टमा नसुनियोस् भनेर तस्कर सिकारीले सतर्कता अपनाउँदै जंगल छिर्ने प्रयासमा लागेका थिए ।
अर्थात्, राजकुमार नभएर के भयो त ? हतियार बोकेर गैँडा मार्न तम्सने अरु कोही तयार भएको रहेछ भन्ने यसले देखाउँछ । अर्थात्, तस्करहरु सधैँ सक्रिय हुँदारहेछन् । उनीहरुले एउटा नभए अर्कोलाई यो काममा आउन लालायित बनाउँदा रहेछन् । अनि, मौका मिल्नासाथ खाग उडाउन खोज्दा रहेछन् भन्ने यसले देखाउँछ । यसअघि, विसं २०६२ सालमा निकुञ्जले खुंखार तस्कर याक्चेलाई समाएपछि चोरीसिकार ठप्प हुने बताएको
थियो । उनले २० वटा खाग विदेशमा बेचेका थिए । तर, साउनमा याक्चे समातिए, असोजमा गैँडा म¥यो । त्यसपछि सिकार थामिँदै थामिएन । निकुञ्जको दाबी
बेकार गयो ।
विसं २०६७ सालदेखियता वर्षमा एउटाका दरले तस्करहरुले गैँडा मार्दै आएका छन् । राजकुमार मलेसिया लागेसँगै गैँडा सिकार कम हुँदै गएको घटना क्रमले देखाउँछ । तर, तस्करहरु यसबीचमा पनि मौकाको पर्खाइमा हुन्छन् ।
निकुञ्जमा सानो छिद्र फेला परेमा पनि छिरेर गैँडा मार्दै खाग झिकेर उम्कन तस्करहरु सफल हुने गरेका छन् । जस्तै, यसअघि विसं २०७१ सालको वैशाख २० मा गैँडा मर्दा निकुञ्जभित्र तैनाथ सेनाको गण भर्खर परिवर्तन भएको अवस्था थियो । नयाँ टिमले मेसो नपाएको अवस्थामा निकुञ्ज मुख्यालय कसरानजिकैको मध्यवर्ती क्षेत्रमा तस्करहरुले गोली चलाएर गैँडा मारेर खाग लगे । सो घटनापछि कुकुरले खोजी गर्दा पनि तस्करहरुको केही पत्ता लागेन ।
त्यसअघि, विसं २०६९ सालको फागुनमा निकुञ्जभित्रै तस्करहरुले गैँडा मारेका थिए । त्यो बेला ध्रुवे भनिने जंगली हात्तीको आतंकले निकुञ्जका प्रमुख संरक्षणहरु चाँडो–चाँडो परिवर्तन भएको अवस्था थियो । सुरक्षाकर्मीहरु हात्ती समाउन केन्द्रित थिए । यस्तो अवस्थामा तस्करहरुले फाइदा उठाएका थिए । अघिल्ला घटनाहरुमा पनि निकुञ्जभित्रैका कमी–कमजोरीहरुको फाइदा उठाएका छन् ।
अहिले निकुञ्जभित्र के हुँदै छ र जसको फाइदा तस्करहरुले उठाउन लागेका हुन्, त्यसका बारेमा केही अनुमान गर्न सकिन्न । चितवन निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत कमलजंग कुँवर यहाँ आएको दुई वर्ष नाघ्दै छ । कर्मचारी एकै ठाउँमा दुई वर्षभन्दा धेरै बस्न पाउँदैनन् । उनी सरूवा हुने सम्भावना प्रबल छ । उनको सरूवासँगै एक्सनमा जाने योजना बनाएका हुन् त तस्करहरुले ?
खाग तस्करीमा अन्तर्राष्ट्रिय गिरोह संलग्न हुन्छ । गैँडा मार्नलाई उनीहरुले स्थानीयलाई परिचालन गर्ने हुन् । यसरी परिचालन हुनेमा चेपाङ समुदायका अत्यधिक छन् । अन्तर्राष्ट्रिय गिरोह सक्रिय रहँदासम्म स्थानीय तहका सिकारी जति समाए पनि अनि जसरी समाए पनि र तर्साउनै खोजे पनि त्यो प्रभावकारी हुँदोरहेनछ भन्ने यो घटनाले पनि देखाएको छ ।
त्यसैले, निकुञ्ज प्रशासन सधैँ चनाखो नरहे गैँडा जोगिन गाह्रो छ । अन्तर्राष्ट्रिय गिरोध तहसनहस बनाउन यहाँको प्रशासनले नसक्ला, तर तस्करहरुले परिचालन गर्ने स्थानीयलाई कसरी रोक्न सकिन्छ भन्नेतर्फ निकुञ्जले पनि बढी ध्यान दिन अपरिहार्य भएको छ । चेपाङ धेरै समातिने विषयमा छलफल गर्न पूर्वसभासद् गोविन्दराम चेपाङले पत्रकार सम्मेलन राखेर भनेका थिए, ‘चेपाङ धमाधम समाएर जेल राखेरमात्रै भएन । भात खान नपाएको चेपाङ जेलमा आएर दुई छाक भात खान पाएको छ । तर, बढी फाइदा अन्तर्राष्ट्रिय तस्कर गिरोहहरुले लिएका छन् । उनीहरुलाई कसरी रोक्न सकिन्छ, त्यसतर्फ सोच्न पर्छ निकुञ्ज प्रशासनले ।’
क्यारेम बोर्डका खाल एक होइन, अनेक हुँदारहेछन् । त्यसैले, एउटा खालको क्यारेम बोर्डका सबै गोटी सक्किए पनि अर्को खालमा खेल चलिरहने यथार्थलाई ख्याल राख्न नसकेमा निकुञ्जलाई सिकारमुक्त बनाउन सकिँदैन । प्रत्येक दिन सिकारको खतरा कायम रहने सम्भावनालाई हेरेर निकुञ्ज प्रशासन चनाखो रहन आवश्यक देखियो । संरक्षण निकुञ्ज प्रशासन र सेनाको मात्रै चासो र दायित्वको विषय होइन, स्थानीयको संलग्नता र सहकार्यमा पनि जोड दिन बिर्सन भएन । स्थानीयको जागरूकता, निकुञ्ज प्रशासनको तत्परताले मात्रै निकुञ्जलाई अभेद्य कवज दिलाउन सक्छ ।